RASMI: Kyle Walker oo heshiis cusub qalinka ugu duugay Tottenham Hotspur – Gool FM
RASMI: Kyle Walker oo heshiis cusub qalinka ugu duugay Tottenham Hotspur
Haaruun September 23, 2016
(London) 23 Sebt 2016 – Kyle Walker ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee heshiis cusub u saxiixa kooxdiisa Tottenham Hotspur, waxaana uu qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah.
Difaacan ayaa raacay wadadii ay horay u mareen Christian Eriksen, Dele Alli, Danny Rose iyo Eric Dier ku waasoo heshiis cusub u saxiixay kooxdooda Spurs qirayna inuu mustaqbalkoodu yaalo kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Walker ayaa Spurs kaga soo biiray Sheffield United sanadkii 2009-kii, laakiin waxa uu amaah ugu soo ciyaaray kooxaha Bramall Lane, Queens Park Rangers iyo Aston Villa, ka hor inta uusan mutaysan booska joogtada ah kooxda koowaad ee Tottenham.
“HESHIIS CUSUB: Waxaan ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in Kyle Walker uu heshiis cusub u saxiixay kooxda kaasoo socon doona illaa 2021-ka” ayaa u dhignaa qoraal kooban oo ay kooxda Tottenham soo dhigtay barteeda Twitter-ka.
Goal oo cabirtay sida Chelsea kaarteeda kulanka Arsenal u ekeen karto berri